PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-09-13 - Aphixana ngoTyhopho amaGcina
Aphixana ngoTyhopho amaGcina
Isolezwe lesiXhosa - 2018-09-13 - IINDABA - SIYABULELA MQIKELA
AZIVANI izindlu eziphambili kwisizwe samaGcina malunga nesikhumbuzo sikaNkosi uTyhopho wamaGcina esiza kuqhutywa eXonxa eCacadu.
Indlu enkulu kaTyhopho yindlu kaNkosi uZwelizolile Mpangele ezinze kumaTyhantya, ithi ayinalwazi ngesi sikhumbuzo.
UWeziwe Mpangele okwangusibonda kwilali zaseMtsheko, uthi ngenene abazani naso esi sikhumbuzo, siqhutywa ngozungul’iichele abajonge ukuchitha ikomkhulu lamaGcina.
“Asibazi ukuba ngoobani aba, akukho mntu ukhe weza kuthi esixelela ukuba kukho isikhumbuzo sikaTyhopho, xa uthetha ngoTyhopho uthetha ngathi, kodwa asinalwazi lwayo yonke le nto,” uthethe watsho uMpangele.
UPhato (Tyhopho) yiNkosi yokuqala yesi sizwe samaGcina eyanikwa ubukhosi nguKumkani uNgubengcuka ngenxa yokukhalipha, ubuchule nobunkunkqela kwimicimbi yakomkhulu.
“Kukho iqela labantu elihamba lichitha, liphikisa zonke izinto ezimileyo ngoku kubukhosi bamaGcina, eli qela linabantu abazibiza ukuba bangamaGcina asemthethweni, asiyazi ke injongo yabo,” uthethe watsho uMpangele.
Imbali ithi ingcwaba likaTyhopho liphantsi kwamanzi kwidama laseXonxa eCacadu, nalapho luzinze khona uninzi lwabantu besi sizwe.
Ngeminyaka yoo1980 urhulumente waseTranskei wamisela ilitye lesikhumbuzo phezu kwedama laseXonxa, enika imbeko kuTyhopho nanjengoko elele kwelo dama amathambo akhe.
Umlawuli webhunga elijongene nezinto ezililifa kweli (National Heritage Council) uSonwabile Mancotywa wakuqinisekisa ukuba bayinxalenye yesi sikhumbuzo. “Siyazana nawo lo mcimbi wokukhumbula uTyhopho, sisifumene isicelo esivela kwikomkhulu lamaGcina kaTyhopho malunga noku,” watsho uMancotywa.
Othethe egameni lekomkhulu lamaGcina, uNkosi uPhandulwazi Mhlontlo, uthi ngenene bayaqhubeka nesikhumbuzo sikaTyhopho eXonxa.
“Amakhaya onke anezinto zawo, nathi apha ekhaya kwaGcina sinazo iingxaki, sona siyaqhubeka isikhumbuzo sikaNkosi uTyhopho ngomhla wamashumi amabini anesibini kule nyanga yoMsintsi,” ucacise watsho uMhlontlo.
Ngaphambili, isizwe samaGcina besicele umhla wamashumi amabini ananye kule nyanga.
“Umhla utshintshile kuba iofisi kaMnu. Sonwabile Mancotywa icele ukuba sisebenzise umhla wamashumi amabini anesibini,” utshilo uMhlontlo.
Izindlu zikaTyhopho eziphantsi kwekomkhulu lamaGcina ziquka Amache, amaHelushe, amaGadlume, amaNtsinga nezinye.
“EKapa nakweli leMpuma Koloni sibambe indibano ukusukela kunyaka ophelileyo ngelizama ukuthetha nesizwe samaGcina malunga nesi sikhumbuzo sikaTyhopho, ulutsha nabo bonke abantu abangamaGcina nesizwe ngokubanzi bayinxalenye yesi sikhumbuzo,” uthethe watsho uMhlontlo.
UNkosi uPhandulwazi Mhlontlo uphuma kwindlu kaNkosi uKadefunwa Gwebindlala Mhlontlo ephantsi kolawulo lukaNkosi uThandisizwe Mhlontlo kuMaqhashu eCacadu.